तहल्का मच्चाउने गरी मात्र पर्दामा आउँछुः भुवन केसी - Asian Samachar
तहल्का मच्चाउने गरी मात्र पर्दामा आउँछुः भुवन केसी
Asian Samachar शुक्रबार, पुस ८, २०७३ (11 months ago) पत्रपत्रिका, मनोरञ्जन
काठमाडौं, अभिनयसँगै विगत दुई दशकदेखि भुवन केसी फिल्म निर्माणमा पनि सक्रिय छन्।उनका ‘कुसुमे रुमाल’, ‘सम्झना’, ‘साइनो’, ‘कन्यादान’, ‘तृष्णा’, ‘चिनो’, ‘सपना’, ‘करोडपति’, ‘नेपालीबाबु’, ‘म तिमीविना मरिहाल्छु’लगायतका थुप्रै फिल्म हिट छन्। सर्वाधिक हिट फिल्म दिने अभिनेताका रूपमा पनि लिइन्छ उनलाई। तर, पछिल्लो समय उनी पर्दामा देखिएका छैनन्।
‘ड्रिम्स’ फिल्मबाट निर्देशकका रूपमा डेब्यु गरेका भुवन अचेल ‘कृ’ फिल्मको तयारीमा छन्। सुरेन्द्र पौडेलको निर्देशनमा भुवनले सुवास गिरीका साथ निर्माण गर्न लागेको ‘कृृ’को सुटिङ फागुनबाट गरिनेछ। भुवनपुत्र अनमोल ‘कृ’मा शीर्ष भूमिका छन्। ड्रिम्समा झैँ ‘कृ’मा पनि भुवनले अभिनय गर्ने छैनन्। अभिनयमा किन पछि हटिरहेका छन् त भुवन ? उनका शुभचिन्तकले सोध्ने गरेका छन्।
‘मैले अभिनय छाडेको होइन,’ भुवन भन्छन्, ‘म कलाकार हुँ। त्यसैले जिन्दगीभर अभिनय छाड्न सक्दिन“। तर, केही समय पर्दाबाहिरै रहन चाहेको छु। आफूलाई फिट हुने, मन पर्ने भूमिका भयो भने मात्रै फिल्म खेल्छु।’
ड्रिम्समा आफूलाई मिल्ने भूमिका नभएर अभिनय नगरेको बताउने भुवन ‘कृ’मा पनि देखिने छैनन्। ‘खेल्नका लागि खेल्ने होइन कि, पहिला झैँ तहल्का मच्चाउने गरी मात्रै पर्दामा आउँछु,’ उनी भन्छन्, ‘म दर्शकलाई निरास पार्न चाहन्नँ। त्यसैले पैसाका लागि मात्र, जुन पायो त्यही रोलमा, संख्या बढाउन या अन्य कुनै स्वार्थमा म दर्शकलाई धोका दिन चाहन्नँ।’
दर्शकले दिएको माया र सम्मानलाई सधैँ कायम राख्न चाहने भएकाले अफर आएका कतिपय फिल्म स्वीकार नगरेको उनको दाबी छ। सानो उमेरमै छोरा अनमोलले ‘स्टारडम क्रिएट’ गरेकोमा भुवन निकै खुसी छन्। ‘अनमोल जम्मा २० वर्षको भयो। उसले आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएको छ। यसमा मलाई निकै खुसी लाग्छ।’ उनी भन्छन्, ‘अनमोल सबै कुरा चित्त नबुझेसम्म फिल्म साइन गर्दैन। उसले स्टारडम बुझेको छ।’
कतिपयले बाबु भुवनले छोराको काममा हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। तर, भुवन यी आरोप निराधार भएको बताउँछन्। ‘अनमोल मेरो छोरो भए पनि मेरो साथीजस्तै छ। मैले उसलाई पाँच वर्षको उमेरदेखि नै उसलाई ठीक लागेको गर्न दिएको छु। म उसको कुनै कुरामा पनि हस्तक्षेप गर्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै कुरा चित्त बुझ्यो भने मात्रै फिल्म साइन गर्छ। चित्त बुझेन भने ५० लाख दिए पनि मान्दैन। ऊ पैसाका लागि काम गर्दैन। उसलाई पैसा कमाएर थुपार्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन।’
बाबु हुनुको नाताले सुझाब सल्लाह दिने गरेको भए पनि अन्तिम निर्णय भने अनमोलकै हुने गरेको भुवन बताउँछन्। ‘मैले बुझे जानेसम्मको सल्लाह, जानकारी उसलाई दिने गर्छु। तर, मैले तैँले यो गर्नैपर्छ, यो गर्नै हुँदैन भनेर कहिल्यै हस्तक्षेप गर्ने गरेको छैन। उसलाई जे ठीक लाग्छ, उसको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ।’
अनमोल अभिनीत सबै फिल्म, ‘होस्टेल’, ‘जेरी’, ‘ड्रिम्स’ र ‘गाजलु’ हिट भए। जसकारण उनलाई एक मात्र सुपरस्टारका रूपमा हेरिने गरिएको छ। अनमोललाई फिल्ममा लिन चाहने निर्माता, निर्देशक थुप्रै छन्। तर, अनमोल हत्तपत्त फिल्म साइन गर्दैनन्। यसमा पनि आफ्नो कुनै भूमिका नहुने दाबी भुवनको छ। ‘साथीभाइले अनमोललाई भन्दिनुप¥यो भन्छन्। मैले त भन्छु नि ! तर, उसको चित्त बुझ्नुपर्छ। कथा, निर्देशक, ब्यानर सबै हेर्छ। उसलाई मन प¥यो भने पैसाको पनि महत्व राख्दैन।’
‘कृ’पछि भुवन आफ्नो निर्देशनमा दोस्रो फिल्म निर्माण गर्ने योजनामा छन्। सो फिल्ममा अनमोल नै प्रमुख भूमिकामा हुनेछन्। तर, सो फिल्ममा पनि आफूले अभिनय नगर्ने मनसाय भुवनको छ। ‘म केहीपछि पर्दामा आउँछु। यसरी आउँछु कि, फेरि एकचोटि तहल्का मच्चिनेछ,’ भुवन भन्छन्, ‘त्यो खालको स्क्रिप्टको खोजीमा छु।’यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।